gagan | NHEICC
जेनेभामा सम्पन्न ७० औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले राखेको विचार
This entry was posted in Video Gallery and tagged gagan, health, ministry, nepal, thapa, WHO on May 28, 2017 by nheicc.
जेष्ठ ९, २०७४- स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले अल्प र न्युन विकसित मुलुकको नागरिकका लागि औषधिको मुल्य सस्तो बनाउन विश्व समुदायसंग अपील गरेका छन् । नेपालसहित १ सय ९४ मुलुक सहभागी रहेको ७० औं विश्व स्वास्थ्य सभामा विभिन्न ऐजेन्सी, भेटघाट, वार्ताहरूमा आधिकारिक निकायहरुसंग उनले उक्त अपील गरेका हुन् । Continue reading →
स्वास्थ्य मन्त्री थापाले गराए कान्ति अस्पतालमा छोरीको उपचार, रियाक्टिभ आर्थाइटिस देखियो
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले छोरीको उपचारका लागि सरकारी कान्ति बाल अस्पताल रोजेका छन् । बुधवार राति १० बजे कान्छी छोरी जियाना बिरामी भएपछि कान्तिको आकस्मिक कक्षमा पुर्याइएको थियो । तीन वर्षीय जियानाको आकस्मिक कक्षस्थित ग्रिन जोनमा अन्य नागरिकका सन्तान सरह उपचार गरिएको अस्पतालका डाक्टर विष्णुरथ गिरीले बताए । आकस्मिक कक्षमा ड्युटीमा रहेका डा गिरी सहित डा विना प्रजापति, डा रामहरी चापागाईँ र रेडियोलोजिष्ट डा भवानी यादवले आवश्यक उपचार र परीक्षण गरेका थिए । Continue reading →
This entry was posted in News and tagged child, gagan, health, ministry, thapa on May 9, 2017 by nheicc.
“मेरो बर्ष २०७४: म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ” अडियो र भिडियोहरु
This entry was posted in Audio Gallery, Video Gallery and tagged barsa, gagan, health, mero, thapa, मेरो वर्ष on April 29, 2017 by nheicc.
“मेरो बर्ष २०७४: म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ” स्लाईडहरु
Mero Barsha – Press Meet_ chaitra 31_FINAL
This entry was posted in Booklets and tagged barsa, campaign, gagan, mero, thapa, मेरो वर्ष on April 29, 2017 by nheicc.
मेरो वर्ष २०७४ “म स्वस्थ – मेरो देश स्वस्थ” अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धमा
This entry was posted in Notices and tagged barsa, campaign, gagan, health, mero, thapa, मेरो, मेरो वर्ष, वर्ष on April 28, 2017 by nheicc.
‘रक्सी नखाने’ गगन थापाको अभियानमा प्रचण्डको साथ
१ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वस्थ्य मार्गमा हिँड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । स्वाथ्य मन्त्रालयको आयोजनामा नयाँ वर्षका दिन राजधानीमा आयोजना गरिएको पदयात्रामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । Continue reading →
This entry was posted in News and tagged barsa, gagan, health, mero, thapa, मेरो, मेरो वर्ष, वर्ष on April 14, 2017 by nheicc.
नयाँ वर्षको अभियानमा “स्वास्थ्य जीवनशैली” अपनाउन सुरु गर्न लागिएकाले उपस्थितिको लागि अनुरोध
This entry was posted in News and tagged basanatpur, event, gagan, new, resolution, thapa, year, मेरो वर्ष on April 13, 2017 by nheicc.
गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट के काम भयो ?
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि गगन थापाले आफूलाई अरु मन्त्रीभन्दा अलग राख्ने काम गरेका छन् । उनले जिम्मेवारी लिन नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण नै मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको जनाएका छन् । विचारजस्तै उनले काम गर्ने अठोट उनले सपथ खाएकै दिन गरेका थिए । स्वास्थ्य जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले उनी जनमुखी कार्म गर्न खोजेको देखिएको छ । यस्तै हो भने के के भए त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू– Continue reading →
This entry was posted in News and tagged gagan, health, ministry, nepal, nheicc, thapa, work on March 3, 2017 by nheicc.